‘हामी आफैंले आफै‌लाई देउता घोषित गरेर बस्यौँ’ | Ratopati
personराम कार्की exploreकाठमाडौं access_timeसाउन २६, २०७६ chat_bubble_outline2
स्कुलिङ भनेको केवल सैद्धान्तिक कुरा पढाउने मात्रै होइन, त्यो त आचरण र जीवन पद्धतिलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा पनि हो । नेपालमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्यो भने मोहनविक्रम स्कुल, निर्मल लामा स्कुल, मोहन वैद्य स्कुल, प्रचण्डको स्कुल, रोहितको स्कुल वा सीपी मैनाली लगायतका वामपन्थी स्कुल हेर्दा त्यो स्कुलबाट उत्पादित मान्छेले सैद्धान्तिक रूपमा कति विलक्षणका साथ आफ्ना कुरा राख्छन् भनेर मात्रै हेरिँदैन । कम्युनिस्ट स्कुलमा उसको आचरण कस्तो छ ? जीवन र यथार्थलाई बुझ्ने तरिका कस्तो छ ? सत्यसँग उसको साइनो कस्तो छ ? यस्ता तमाम कुरालाई पनि हेरिन्छ । पुराना सबै नेताहरुको स्कुलबाट उत्पादित विद्यार्थीको आजको स्थिति हेर्दा सबै, दोष उनीहरुलाई थुपार्ने कुरा त भएन । तर त्यसबाट केही त राम्रा मान्छे निस्किन पर्ने हो नि ? यसबारेमा चिन्तन मनन हुनु जरुरी छ । जस्तो हेगेलको स्कुलबाट माक्र्स निस्के । रुसमा प्लेखानोभहरुको मार्क्सिस्ट आधारहरुबाट लेनिनहरु निस्के ।
तपाईं के भन्नुहुन्छ, के पढाउनुहुन्छ भन्दा पनि के गर्नुहुन्छ ? त्यही कुरा मान्छेले पढ्छ । तपाईंले के पढ्नुहुन्छ, अर्कोले त्यही मन्त्र नअड्किई जप्यो भने त्यसलाई पढेको भनिदैन । मुख्य कुरा तपाईं कस्तो जीवन जिउनुहुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ ।
नेकपामा कस्तो स्कुल विभाग हुनुपर्छ भन्ने बारेमा ख्याल गर्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक कार्यदिशा हो । पार्टीले लिने आम राजनीतिक कार्यदिशा के हुन्छ ? त्यसले थुप्रै कुरालाई प्रभावित पार्छ । माओत्सेतुङ्ले यसलाई ‘जाल’ भन्नुभएको थियो । तपाईं जाल कस्तो फ्याँक्नु हुन्छ ? जालका प्वालहरु ठूलाठूला छन् भने मान्छा उम्केर जान्छन्, भ्यागुता पस्लान् । त्यसैले मुख्य कुरा पार्टीको आम राजनीतिक कार्यदिशा हो । हिजो दुई अलग अलग पार्टी भएको स्थितिमा दुईवटै पार्टीले अवलम्बन गरेका राजनीतिक कार्यदिशाको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।
जस्तो; हिजो एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद राजनीतिक कार्यदिशा अपनाएको थियो । माओवादीले एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास भन्ने कार्यदिशा अगाडि ल्याएको थियो । त्यो राजनीतिक दस्तावेज थियो । राजनीतिक कार्यक्रम र कार्यदिशामाथि बृहत् तरिकाले त्यसको राम्रो नराम्रो पक्षमाथि द्वन्द्वात्मक ढङ्गले छलफल हुनुपथ्र्यो । तर दुर्भाग्यको कुरा, त्यसो भएन ।
हामीकहाँ पितृदेवता मान्ने चलन छ । वितेर गएका सबै कुरा देउता भए । नदेखिने चिज जति सबै देउता भनेजस्तै तत्कालीन एमालेका साथीहरुले जबजलाई र त्यसका प्रतिपादकलाई पनि देउता बनाउनुभयो । यता एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकास भन्ने हामी तत्कालीन माओवादीकाहरुले पनि त्यसलाई विकास गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने काम गरेनौँ । अलिकति केही प्रश्नहरु त्यतिबेला उठाउन खोजिएको थियो तर पछि केही छलफल नै भएन । त्यसका प्रतिपादक हाम्रा सबै नेताहरु जिउँदै भएकाले हामी आफैले आफैलाई देउता घोषित गरेर बस्यौँ ।
त्यसैले अहिले सबैभन्दा जरुरी कुरा अतितको समीक्षा नै हो । हामीले एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी दस्तावेजको निर्मम समीक्षा गर्ने हिम्मत जुटाउनै पर्छ कतै त्यो दस्ताबेज गलत भएकाले त हामी यहाँ आइपुगेका हैनौं ?
हिजोआज रातारात ठेकेदार पार्टी प्रवेश गर्ने, अर्को कित्ताको मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीमा आएर रातारात उमेद्वार बन्न पाइहाल्ने स्थिति पार्टी आउनुभनेको या त एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासमा हाम्रा कमजोरी थिए या त हामीले त्यसलाई सही ढङ्गले लागू नै गरेनौैं। यो कुरामा निष्कर्षमा त पुग्नुपर्यो नि !
सबैभन्दा मुख्य कुरा शिक्षा हो । अहिले नेपालमा शिक्षासम्बन्धी सोच र शिक्षा प्रणाली कस्तो छ ? त्यसलाई बुझ्न मार्क्सवाद चाहियो । वर्तमानलाई कारणसहित बुझ्न, बदल्नका लागि मार्क्सवादको जरुरत छ । अरू कुनै दर्शन, सिद्धान्त वा विचारधाराले वर्तमानलाई बुझ्न सकिँदैन ।
हाम्रो पार्टीमा आउने ठेकेदारले त त्यो कम्युनिस्ट घोषणापत्र पढेको छैन होला । बिभिन्न क्षेत्रका माफियाहरू जो भटाभट पार्टीमा आइराखेका छन्, तिनले त पनि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो पढेका छैनन् होला ! त्यसबाट उनीहरु निर्देशित छैनन् । अब यिनीहरुको सहारामा वर्तमान बुझ्न सकिन्छ र ? सकिँदैन । त्यसले गर्दा यो दुर्घटनाको सिकार हुन सक्छ ।
हाम्रो पार्टीमा आउने ठेकेदारले त त्यो कम्युनिस्ट घोषणापत्र पढेको छैन होला । बिभिन्न क्षेत्रका माफियाहरू जो भटाभट पार्टीमा आइराखेका छन्, तिनले त पनि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो पढेका छैनन् होला ! त्यसबाट उनीहरु निर्देशित छैनन् । अब यिनीहरुको सहारामा वर्तमान बुझ्न सकिन्छ र ? सकिँदैन । त्यसले गर्दा यो दुर्घटनाको सिकार हुन सक्छ । सक्छ मात्र हैन हुन्छ । मार्क्सवादसँग असङ्गत कुराहरुलाई बोकेर आफूलाई मार्क्सवादी भन्दै हिँड्दा त्यसले निम्त्याउने भनेको दुर्घटना नै हो । त्यसको राम्रो दृष्टान्त रुसमा भएको दुर्घटना नै हो ।
नेकपामा अब नयाँ राजनीतिक कार्यदिशाको र त्यही राजनीतिक कार्यदिशा अनुकुलको राजनीतिक सङ्गठन चाहिएको छ । यथास्थितिमै अघि बढ्ने हो र चुनावदेखि चुनावसम्म नै जाने हो, अरू सङ्घर्षका कुनै पनि रूप नअपनाउने र चुनाव मात्रै गर्ने भने हालकै ढाँचाको सङ्गठनले चलिहाल्छ । त्यसका लागि जित्न सक्नेलाई टिकट दिनुस् । तपाईंलाई कार्यकर्ता किन चाहियो ? जो जिता वही सिकन्दर ! त्यही ठूलो कम्युनिस्ट ।
तर त्यसले समाज चाहिँ फेरिँदैन । त्यसले समाजको सङ्कट झन् घनिभूत हुँदै जान्छ । त्यो एउटा विष्फोटक स्थितिमा पुग्छ । त्यसकारण, कि त समाजवादको आवरण फ्याँकिदिनु पर्यो । हैन, समाजवादको आवरण बोकिराख्ने हो भने समाजवादको अन्तर्य पनि चाहिन्छ । त्यो अन्तर्य भनेको नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा नै हो । त्यसका लागि अतितको जबज या एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको विकासको समीक्षा गर्नुपर्यो । त्यसलाई पितृश्राद्ध जस्तो नगरौँ । त्यसलाई पितृदेवता नमानाैं ।
अहिले स्कुल विभाग यस्तो चाहिएको छ, जसमा बस्ने मान्छेमा आलोचनात्मक चेत होस्, उसले मेरो गोरुको १२ रुपैयाँ नभनोस् । एमालेबाट आएकोे छ भने जबज नै ठूलो हो भन्ने, माओवादीबाट आएको छ भने एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास छोड्न मिल्दैन भन्ने हो भने त्यसले मार्क्सवादको गत्यात्मकतालाई बन्ध्याकरण गरिदिनेछ ।
मार्क्सवादले आफैप्रति पनि आलोचनात्मक बन्न सिकाउँछ । जबजका कमजोर पक्षहरू के हुन् भन्ने कुरा एमाले पङ्क्तिबाट कहिल्यै सुनिएन । एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको विकासमा त्रुटि के के छन् भन्ने कुरा माओवादीका नेताबाट कहिल्यै सुनिएन । यस्तो पनि मार्क्सवाद हुन्छ ? हामीले त्यसमाथि छलफल नै गरेनौँ । जबज मार्क्सवादी सिद्धान्तमाथि उभिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा जुन छलफल चाहिन्थ्यो, त्यो हामीले गरेनौँ । एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास भन्नेमा हामीले केही प्रस्तावना राख्यौं । त्यो माथि छलफल नै भएन । आफैले अगाडि ल्याएको सिद्धान्तप्रति आफै इमानदार नभए स्वाभाविक रूपमा त्यसले विकृति ल्याउँछ ।
दुवै पक्षले पहिला के महसुस गर्नुपर्यो भने दुवै पार्टी सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपमा कमजोर भएपछि एकता भएको हो । यी दुईमध्ये एउटा बलियो भएको भए पार्टी एकता हुँदैनथ्यो । एमालेका साथीहरुलाई भित्रबाट के लागेको हुनसक्छ भने कहाँ हिँडेका थियाै‌ं, कहाँ आइपुग्यौं । कैयौं साथीहरुको भनाइमा त्यो अभिव्यक्त हुन्छ, पार्टी त चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै छ । पार्टीभित्र ठेकेदार, तस्कर, माफिया आइराखेका छन् । उनीहरु हाबी भइराखेका छन् । हाम्रा नेता त्यसैको वरिपरि घुमिराखेका छन् । उनीहरुलाई गाउँका कार्यकर्ता आउँदा त्यति प्रिय लाग्दैन ।
हाम्रा नेताहरुले आफ्नो जीवनमा यी दुई पार्टीको एकता घोषणा गरिदिनुभयो, त्यो सबैभन्दा राम्रो भयो । राम्रो कुराको त समर्थन हुन्छ । त्यो समर्थनले उहाँहरु यति उत्साहित हुनु भयो कि अब हामी दुई जनाले बोल्दा हुने रैछ, हामी दुई जनाले सबै तय गर्दा हुने रैछ भन्ने बुझ्नुभयो । त्यो त हुँदैन । संसारमा कोही पनि यस्ता मान्छे छैनन् ।
किन यस्तो स्थिति बन्यो भनेर एमालेभित्र पनि प्रश्न उठे । माओवादीभित्र पनि यत्रो सामाजिक परिवर्तन गर्ने भनेर हिँडेको हेर्दाहेर्दै हामी कहाँ आइपुग्यौँ ! कुन भड्खालोमा आइपुग्याै‌ं भन्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि एकता भएको हो । हाम्रा नेताहरुले आफ्नो जीवनमा यी दुई पार्टीको एकता घोषणा गरिदिनुभयो, त्यो सबैभन्दा राम्रो भयो । राम्रो कुराको त समर्थन हुन्छ । त्यो समर्थनले उहाँहरु यति उत्साहित हुनु भयो कि अब हामी दुई जनाले बोल्दा हुने रैछ, हामी दुई जनाले सबै तय गर्दा हुने रैछ भन्ने बुझ्नुभयो । त्यो त हुँदैन । संसारमा कोही पनि यस्ता मान्छे छैनन् ।
नेतालाई भेट्ने कार्यकर्ता उत्साहित हैन, निराश भएर किन फर्कन्छ ?
नेताकाेमा को भेट्न आउँछ, को जान्छ, सबै कुराको ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबेलामा उनीहरुले कुनै व्यापारी एउटा पोको लिएर गएको कार्यकर्ताले देखे भने नेताले गरेका सबै भाषण बिर्सन्छन् ।
जस्तै, नेता भेट्दा उनीहरु नेताका विचार र कुराबाट मात्र प्रभावित हुँदैनन् । उनीहरु त नेताको छोरी, छोरा, आफन्तहरूका गतिविधि नियालिरहेका हुन्छन् । उनीहरू केमा आउँछन्, केमा जान्छन्- सवैतिर चियाउँछन् । नेताकाेमा को भेट्न आउँछ, को जान्छ, सबै कुराको ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबेलामा कुनै व्यपारी एउटा पोको लिएर गएको कार्यकर्ताले देखे भने नेताले गरेका सबै भाषण बिर्सन्छन् ।
त्यसकारण पहिलो स्कुल भनेको त्यही हो । स्कुलिङ भनेको हामीले के लेख्छौं, के बोल्छौं भन्ने मात्रै हैन, हामी के गर्छौं, त्यो पनि हो । जस्तो; हामीसँग विमति राख्ने मान्छेसँग कति मिल्छौं ? युनिर्भसल कुरा जस्तो छ, तपाईं जति कम शासन गर्न चाहनु हुन्छ, त्यति तपाईंको शासन लामो टिक्छ । संसारमा कडा चिज चाँडै भाँचिन्छ । विध्वंशको आवाज हुन्छ । रूख ढल्दा आवाज आउँछ तर रुख बढ्दा आवाज आउँदैन ।
त्यसकारण हाम्रो स्कुलिङको मुख्य कुरा भनेकै पारदर्शिता हो । त्यसमा मार्क्सवादका आधारभूत कुरा पढाउने त छँदै छ । ऊ त्यो पढिसकेपछि आलोचनात्मक बनोस् । उसले प्रश्न गरोस् । हाम्रो पार्टीमा पनि प्रश्न गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्यो । यहाँ त एक पटक प्रश्न गरेपछि नेतासँग भेट्नै हुँदैन । त्यसपछि कसरी नयाँ विचार आउँछ त ?
त्यसैले अब बनाउने स्कुल विभागलाई गहन वैचारिक छलफलमा होम्नु जरुरी छ । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य कस्तो छ ? नेपालको कृषि कस्तो छ ? महिला, दलित प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने ? मधेसको प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने ? यी लगायत यावत विषयहरुलाई गहन छलफल लैजानुपर्छ । मधेशमै मुद्दाका सन्दर्भमा मधेसीहरुकै बीचमा घनिभूत छलफल गरौँ न । कसो गर्दा मधेसी जनताले भेदभाव अन्त्य भएका महसुस गर्छन् । त्यो कुरा हामी मधेसी कमरेडहरु बीचमा छलफल गर्न सक्दैनौँ ? अब हामी यसरी जानुपर्छ । मुख्य कुरा भनेकै हाम्रो नीति बनाउने तरिका, बजेट बनाउने तरिका र हाम्रो आचरणमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
स्कुल विभागमा रडाको किन त ?
जबजको राजनीतिक कार्यदिशा अपनाएपछि एमाले ठूलो पार्टी भयो । त्यसबेलाको चुनावको परिणामले त्यही देखायो । उनीहरुलाई के भ्रम भयो भने अब हामी सबैलाई खान्छाँै । ०६४ मा माओवादीलाई पनि त्यस्तै लाग्यो । ०६४ मा एमालेले माओवादीसँग एकता गरौँ भनेको भए माओवादीले कुट्थ्यो । अहिले एमाले कहाँ छ ? हामी एमालेलाई देखाइदिई हाल्छाँै नि । भन्ने एमाओवादीलाई लागेको हुन सक्छ । त्यसैगरी, ०७० मा आएपछि एमालेलाई के लाग्न थाल्यो भने माओवादीलाई अब हामी खान्छौं । तर त्यस पछाडिको निर्वाचनले के देखायो भने दुईवटैले दुईवटालाई नै खान सक्ने स्थिति छैन । जबजको कार्यनीतिले ठूलो पार्टी बनाएको त देखियो तर त्यो जबजले बनायो कि जबज छोडेर बनायो ? संस्कार के बन्यो ? संस्कृति के बन्यो ? यो पाटो महत्वपूर्ण हो ।
संख्याले जोगाउँदैन, जोगाउने सही विचारले नै हो भन्ने इतिहासको यो निर्मम घटनाबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । आफूहरुले अंगालेको राजनीतिक कार्यदिशा र सिद्धान्तले पार्टी कस्तो बन्यो भन्ने कुरा पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । आठ लाख सदस्य भएको पार्टीले असल उद्देश्यका निम्ति आठ हज़ार मानिस परिचालन गर्न नसकिने हाम्रो बर्तमान हालत फेर्ने आँट जुटाउनुको सट्टा अतितको गौरव गाएर लठ्ठिनुले हामीलाई भडखालोतर्फ नै लैजान्छ । अहिलेको अंह प्रश्न भनेकै अतितसँग टाँसिरहने वा अतितको पूजा गर्ने कुुरालाई परित्याग गरेर समीक्षा गर्नुपर्‍यो, वर्तमानलाई अध्ययन गर्नुपर्‍यो र वर्तमानलाई परिवर्तन गरेर अग्रगामी दिशातिर अघि बढ्ने सही राजनीतिक कार्यदिशा अपनाउनु पर्‍यो ।
(कार्कीसँग रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)
Aug. 31, 2019, 9:03 a.m. Sharad Chandra Simkhada
Ram dai ko bichar udatta xan. Sabaile yesari nai soche parti kaha pugthyo. Babita jee r ratopati pariwarlai dherai dhanyabad for such wonderful interview. Keep on interviewing such personalities.
Aug. 12, 2019, 6:46 a.m. Krishna kopila
Real analysis dear comrade Ram Karkiko !